AMISOM oo ka hadashay la dagaalanka Al-Shabaab
Saraakiisha ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay sheegeen in ay bilaabayaan howgal cusub oo ay ku doonayaan in ay Al-Shabaab ay kala wareegaan degaanka iyo degmooyinka ay ka gacanta ku hayaan ee ku yaalla gudaha Soomaaliya.
Ka dib kulan ay yeesheen Saraakiisha ugu sareeysa ciidanka AMISOM ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay sidii dib u eegis lagu sameyn lahaa howgalka la dagaalanka Xarakada Al-Shabaab ee ay wadaan ciidanka AMISOM.
Qaar ka mid ah Taliyeyaasha ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka la dagaalanka Shabaab ee AMISOM Istiraatiijadooda waxbadan laga badan ,islamarkaana ay ku rajo weyn yihiin in ay dhawaan qaadaan howgalka ka dhan Al-Shabaab oo la doonaayo in looga saaro degaanada ay gacanta ku hayaan.
Waxaa sidoo kale kulanka ay yeesheen Saraakiisha ciidanka AMISOM looga hadlay sidii loo xoojin lahaa tababarada la siiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Qaar ka mid ah Saraakiisha ciidanka AMISOM ayaa sheegay in ciidanka AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay si wadajir u wada shaqeyn doonaan.
Wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya, Francisco Caetano Madeira ayaa sheegay in uu ku amaanaayo howgalada ay wadaan ciidanka AMISOM iyo sidoo kale geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya sida ay uga qeyb qaateen ciidanka AMISOM .
Taliyaha ciidanka AMISOM General cusmaan Nuur Subagle ayaa kulanka ka sheegay in howgalka la dagalaanka Al-Shabaab ciidanka AMISOM waxbadan laga badeli doono.
Ciidanka AMISOM ayaa inta badan waxa ay yeesheen kulamo kala duwan oo looga hadlaayo la dagaalanka Xarakada Al-Shabaab iyo sidoo kale ammaanka Soomaaliya.